11 चीजहरू तपाईले जीवन संग थाँहा प्राप्त गर्न रोक्न सक्नुहुन्छ - ब्लग
11 चीजहरू तपाईले जीवन संग थाँहा प्राप्त गर्न रोक्न सक्नुहुन्छ
जीवन छोटो हुनुको विचारलाई सामान्य रूपमा अहिलेलाई अँगाल्ने कारणको रूपमा धक्का दिइन्छ, जुनसुकैलाई पनि अँगाल्नको लागि वर्तमान क्षणमा उनीहरूको खुशी पाउनको लागि।
उदाहरणका लागि पाउलो कोइल्होबाट यस उद्धरण लिनुहोस्:
एक दिन तपाई उठ्नुहुनेछ र तपाईले पहिले खोज्नु भएको चीजहरू गर्न कुनै समय आउँदैन। अब यो गर्नुहोस्।
तर के जीवन साँच्चै छोटो छ?
यो सत्य हो कि त्रासदी, बिमारी वा अप्रत्याशित परिस्थितिले गर्दा जीवन छोटो हुन सक्छ जुन तपाईलाई कहिँ पनि हिर्काउँदैन, तर जीवन धेरै व्यक्तिको लागि छोटो हुने छैन।
यो लामो हुन गइरहेको छ।
यदि तपाइँ जीवनको परम्परागत मार्ग अनुसरण गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको जीवनको पहिलो २० वर्षको लागि स्कूल जानुहुन्छ, सायद बढी।
त्यसोभए, तपाईं रोजगार बजारमा जानुहुन्छ जहाँ तपाईं सायद घर किन्नुहुनेछ, परिवार बसाल्नुहुनेछ, र or० वा years० बर्ष अवकाशको लागि बचत गर्नुहोस्।
र फेरि आशा छ, तपाई रिटायर हुनुहुन्छ, र तपाईको चाँदी र सुनौलो वर्ष शान्ति र आराममा बाँच्न पाउनुहुनेछ जुन तपाईले आफ्नो जीवनको कार्यमाथि राख्नु भएको छ।
कमसेकम, त्यो योजना हुनु पर्ने हो - जीवनले जुनसुकै योजना गरे पनि काम गर्दैन।
तर अझै पनि, त्यो लामो समय हो कि सबै कुरा योजना अनुसार हुन्छ।
दिनदिनै, हप्ता पछि, हप्ता पछि महिना, वर्षैपिच्छे यही कुरा गरिरहँदा एकलौठो हुन्छ।
मानिसहरुलाई आफ्नो जीवनमा विविधता चाहिन्छ, यहाँसम्म कि पूर्वानुमान योग्य, संरचित अस्तित्वको साथ सहज छन्।
विविधताको अभावले मानिसहरूलाई बोर महसुस हुन्छ र अन्ततः उनीहरूको जीवनको धेरै वा सबै पक्षहरूमा एक बिग्रनको कारण हुन सक्छ।
यो लेख यस कपटी बोरडमको गहिरोमा डुल्नेछ। यसले अन्वेषण गर्दछ कि यसले कस्तो महसुस गर्दछ, के यसले यसको कारण गर्दछ, र यसलाई कसरी पार गर्ने।
त्यसोभए, हामी भित्र हामफाल्नु पर्छ, के हामी?
जीवनमा झर्को लाग्दा कस्तो महसुस हुन्छ?
जीवनको साथ बोरडम तपाईको रन अफ द मिल बोरडम जस्तो हुँदैन।
जब जीवन बोरिंग महसुस गर्दछ, तपाईं बिहान बिहान यस्तो संसारमा उठ्नुहुन्छ जुन रंग, सौन्दर्य, वा उत्तेजित रहित हो।
तपाईं दिशाहीन महसुस गर्नुहुन्छ। तपाई दिनहुँ ठक्कर खान्नुहुन्छ, समाजले गर्न चाहानुभएको चीजहरू गर्दै, र त्यसपछि तपाईं ओछ्यानमा जानुहुन्छ र विचलित, अस्वस्थ निद्रामा पर्नुहुन्छ।
हप्ताको अन्त पनि - प्रायः कार्यस्थलको एकलताबाट विश्राम गर्ने ठाउँले तपाईलाई खुशी पार्दैन।
तपाईको प्रत्येक अंश तपाईको जीवन परिवर्तन भएको चाहान्छ, तर तपाई यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न, र तपाई आफैं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईलाई थाहा छ यो केहि तरीकाले छ।
त्यतिन्जेल तपाईं जीवनको समुद्रीमा तैरिरहनुभएको ड्रिफ्टवुड हुनुहुन्छ, केवल धारहरूमा बकबक गर्दै।
तपाईको जीवनमा अरुले ईर्ष्या गर्न पनि सक्छ - एउटा ठोस सम्बन्ध, राम्रो काम, खुशी बच्चाहरु, राम्रो घर, फेन्सी सम्पत्ति - तर तपाईं अझै चाहानुहुन्छ।
तपाईं धेरै द्वारा प्रेम हुन सक्छ र अरू तपाईं जो निर्भर छन्, यद्यपि तपाईलाई लाग्छ कि यो भन्दा जीवन अझ बढी भएको छ।
र यो भावना केवल दिमागमा सीमित छैन ...
जीवनको बोरियतले तपाईंको शरीरमा पनि जान्छ। यसले टाउको दुखाइ, मांसपेशिको जड, पाचन समस्या, र अन्य चीजहरूको बीचमा ऊर्जाको सामान्य अभाव हुन सक्छ।
यो सत्य, आत्मा-कुचल कंटाउन जस्तो लाग्छ।
के यो उदासी उदासी जस्तै हो?
छोटो उत्तर हो: सधैं हुँदैन।
तपाईं यस गहिरो बोरियत अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ नै नैतिक अर्थमा उदास नहुनु।
र तपाईं उदासिनताबाट ग्रस्त हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंको दिनको दिनको अस्तित्वको साथ पूर्ण र पूर्ण रूपले बोर नहुनुहोस्।
त्यहाँ दुई समूह र बीच एक ओभरल्याप छ उदासिनता र उदासीनताको बीचमा अन्तर्क्रिया हुन सक्छ।
तर डिप्रेसनले अझ गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले यदि तपाईं निराश हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, डाक्टर वा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरसँग कुरा गर्नु उचित हो।
हामीलाई बोर बनाउन प्रविधिले कस्तो भूमिका खेल्छ?
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मनोरञ्जनको लागि हामीसँग उपलब्ध विकल्पहरूको भरपर्दो बावजुद हामी अझै आफैंलाई ऊored्गिएको र छुट्टिएको महसुस गर्छौं।
हामी हाम्रो खल्तीमा एउटा उपकरण बोक्दछौं जसले हामीलाई तत्काल मनोरन्जन र मानवताको सामूहिक ज्ञानमा पहुँच दिन्छ।
यो कसरी हाम्रो औंलाको टुप्पोमा हामी यति थकित छौं कि छ?
Overstimulation एक योगदानकर्ता हो। मनोरन्जनको लागि नचाहिने संख्याको विकल्पले ती सबैलाई निराशाजनक र बोरिंग लाग्न सक्छ।
केही समय पछि, हामी आफैं हाम्रो ओछ्यानमा बसिरहेको पाउँछौं, उद्देश्य बिना सोशल मीडियाको माध्यमबाट स्क्रोलिंग गर्दै वा अर्को चीज पाउन द्वि घातुमान घडीको खोजी गर्न खोज्नुको सट्टा बाहिर आउनु र जीवनमा व्यस्त रहनुको सट्टा।
इन्टरनेटको धेरैजसो अनुभव तत्काल तृप्तिमा आधारित हुन्छ। परिणाम स्वरूप, औसत ध्यान अवधि छोटो छ।
यसले गाह्रो बनाउँदछ अधिक गाह्रो गतिविधिहरूमा संलग्न गर्न जुन अर्थ, उत्साह, वा वास्तविक मनोरन्जन प्रदान गर्दछ। यो कुनै पनि प्रयास मास्टर गर्न समय लाग्छ।
हामीले गर्नैपर्छ धैर्यवान हुनुहोस् हामीले चाहेको चीजहरू निर्माण गर्न र त्यसलाई अनुसरण गर्न पर्याप्त, चाहे त्यो क्यारियर हो, परिवार हो, वा अधिक अर्थपूर्ण जीवन हो।
अर्थपूर्ण जीवन हुनु किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
पुरानो असन्तुष्टि पछाडि विचार भनेको एक व्यक्ति हो नियमित दुखी जसरी उनीहरूको जीवन जाँदै छ वा उनीहरूको हालको पथ।
हामी दैनिक एकलौताका सबै उदाहरणहरूबाट उम्कन सक्दैनौं। कसैलाई पनि लाइनमा उभिन मनपर्दैन, आफ्नो यातायातमा बसेर समय बर्बाद गर्दछ वा व्यर्थका सभाहरूमा रुचि राख्ने प्रयास गर्दछ।
तर यी कहिलेकाँही जीवन मार्फत आवश्यक भाग हो।
यो कुरूप सत्य हो, कुनै पनि एक समय सबै खुशी रहन छ। यो एक अव्यावसायिक अपेक्षा हो जसले अधिक दु: ख र असन्तुष्टि निम्त्याउँछ।
दीर्घ असन्तुष्टि तब हुन्छ जब एक व्यक्ति आफ्नो समग्र जीवन अनुभव संग असन्तुष्ट छ।
सायद उक्त व्यक्तिले शान्त जीवन बिताएको छ, अर्थहीन कामबाट अर्थहीन काममा उछाल, उथलो मित्रता उथल मित्रता, खाली सम्बन्धलाई खाली सम्बन्ध।
उनीहरूसँग कुनै चीजमा आनन्द पाउन गाह्रो हुन्छ किनकि यसले सबै महसुस गर्दछ यति उथले र व्यर्थ
त्यो खोक्रोपनले धेरै अस्वास्थ्यकर ब्यवहारहरू र बिमारीहरूलाई बढवा दिन सक्छ - ड्रग्स र मदिरा सेवन, डिप्रेशन र चिन्ता सहित।
कहिलेकाँही यो अर्को तरिकामा हुन्छ, जहाँ डिप्रेसन वास्तवमा एकको जीवनमा कुनै खुशी वा खुशी महसुस नगर्ने कारण हो।
ती खाली भावनाहरूले व्यक्तिलाई संलग्न गराउन सक्छ स्वयं विनाशकारी व्यवहार केवल उनीहरूको जीवनको थकावटलाई तोड्न प्रयास गर्न।
हुनसक्छ उनीहरूले सम्बन्धलाई भुँइमा हाल्न सक्छन् किनभने तिनीहरू नाखुश छन् वा उनीहरूको जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा तोडफोड गर्छन् केही नाटक सिर्जना गर्नका लागि।
यसको मतलब यो होइन कि सबै डाउनटाइम वा बोर हुनु खराब चीज हो। होइन।
एक अर्को विश्राम गर्न को लागी समय लिनु पर्छ र अर्को सुखी, उद्यम, वा साहसिक मा डुब्नु अघि पुन: प्राप्ति गर्न। यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने, तपाईं आफैलाई जलाउनुहुन्छ र सुरुमा आफैलाई फिर्ता फेला पार्नुहुनेछ। आफूलाई प्याकिंग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
अर्थपूर्ण जीवन भनेको तपाईंको लागि के अर्थ हो?
अर्थपूर्ण जीवनको विचार भनेको व्यक्तिगत सन्तुष्टि, उपलब्धिको भावना र केही हदसम्म आनन्द प्रदान गर्ने कुरा हो।
सामाजिक मिडिया र भोक रायको विपरीत, अर्थको साथ खुशीको चिन्ताको लागि सावधान हुनुपर्दछ। दुई जहिले पनि सहसंबद्ध हुँदैन।
उदाहरणको रूपमा, सायद त्यहाँ कुनै सामाजिक कार्यकर्ता छ जो उनीहरूको ग्राहकलाई उनीहरूको जीवन सुधार गर्न मद्दत गर्न गहिराइमा संलग्न छ।
त्यसले ठूलो उपलब्धि र सन्तुष्टि ल्याउन सक्छ, तर मानिसहरूलाई दिनदिनै दुःखकष्ट भोग्नु पर्दैन।
यो एक संघर्ष मा आफ्नो खुशी पाउन र जीवन को अन्धकार पक्ष पाउन भनेर सोच्न अनौठो हुनेछ, तर केहि मानिसहरु। केहि मानिसहरु यो मा फस्छन्।
केहि द्वन्द्वमा हुन र आफ्नो लागि केहि ठूलो को एक हिस्सा हुन को लागी केहि को लागी केहि को लागी को लागी उनीहरु लाई प्राथमिकता दिन्छन्। र यसको फलस्वरूप, यसले तिनीहरूलाई केही डिग्री व्यक्तिगत सन्तुष्टि र आनन्द प्रदान गर्दछ, तर यो आशा गर्नु मूर्खता हुनेछ।
डूबिन र नियमित आधारमा दुःखकष्ट हेर्दा व्यक्ति सजिलै डिप्रेसनमा सर्पिल हुन सक्दछ यदि उनीहरू कम्पार्टर्लाइज गर्न सक्दैनन् र आफैंको राम्रो देखभाल गर्न सक्दैनन् भने।
व्यक्तिले बिभिन्न तरिकाहरूमा अर्थ फेला पार्दछ।
केहीको लागि, यसले क्यारियरमा काम गरिरहेको छ तिनीहरूसँग खुशी छन् र खुशी छन्। अरूले आफ्नो परिवारलाई मायालु परिवार खेती गर्न र हुर्काउनमा अर्थ लाग्न सक्छ।
कसै-कसैलाई अरूमा वा कमजोरलाई सेवामा लाग्न सक्छ। कलाकारहरूले यसलाई सृष्टिमा फेला पार्न सक्दछन्। वैज्ञानिकहरूले यसलाई आविष्कारमा फेला पार्न सक्छन्। त्यहाँ असंख्य मार्गहरू छन्, जुन सबै केहि डिग्रीसम्म व्यावहारिक छन्।
त्यहाँ कुनै सेट, एकल मार्ग खुशी, अर्थ, र जीवन संग सन्तुष्टि महसुस । तपाईंको मार्ग हुन गइरहेको छ तपाइँको लागि अद्वितीय ।
यसले अन्य व्यक्तिहरूसँग समानताहरू साझेदारी गर्न सक्दछ, तर कुन लक्ष्यले तपाईंलाई सबैभन्दा अधिक अर्थ दिन्छ र यसलाई पछ्याउँदछ भन्ने कुराको लागि यो तपाईंको मिशन हुन जान्छ।
संकेत उहाँ तपाइँको शरीर को भाषा मा आकर्षित हुनुहुन्छ
यसको मतलब यो होइन कि तपाई एक्लो जानुहुन्छ वा कसैले तपाईको बाटोमा तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउँदैन, केवल अरु कसैलाई मात्र तपाईले सफा प्याकेजमा तपाईले सुम्पनु पर्छ भन्ने आशा गर्नु हुँदैन, माथिको धनुको साथ। यो हुने सम्भावना छैन।
मेरो जीवनमा अर्थ र खुशी प्रदान गर्ने कुरा मैले कसरी पत्ता लगाउने?
यो यति सरल छ।
यो कन्ट्रिर्वेड देखिन्छ, तर तपाईंको जीवनमा खुशी, सन्तुष्टि, र अर्थ प्रदान गर्ने कुराको लागि एक मात्र तरिका सक्रिय रूपमा जीवनमा संलग्न हुनु र कामहरू गर्नु हो।
'तर के मलाई यो मनपर्दैन भने?'
त्यसोभए तपाईं गर्नुहुन्न। र तपाईं अर्को चीजमा जानुहुन्छ।
जे होस्, जब तपाइँ आवश्यक कुराहरू चाहनुहुन्न वा रमाइलो गर्नुहुन्न भने पनि, तपाइँ तपाइँको ज्ञान र विश्वको परिप्रेक्ष्यमा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, जसले तपाइँलाई धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउन र तपाइँ के गर्नुहुन्छ र के मनपर्दैन भनेर राम्रोसँग बुझाउने क्षमता प्रदान गर्दछ।
संभावना राम्रा राम्रा हुन्छ तपाईले केहि चीजहरु गर्नु हुन्छ जुन तपाईले मनपराउनु हुन्न पहिले तपाईले अर्थपूर्ण कुरा फेला पार्नु भन्दा पहिले।
वा हुनसक्छ तपाईं गर्नुहुन्न! हुनसक्छ तपाईले केहि नयाँ प्रयास गर्नुहुनेछ र यसले सामग्री र पूर्ति प्रदान गर्दछ।
'तर म यो गर्न सक्दिन!'
यो महँगो हुनुपर्दैन। तपाईले आफुलाई खोज्न केहि $ 5,000 डलरको यात्रामा केही उष्णकटिबंधीय स्वर्गमा यात्रा गर्नु पर्दैन।
लाइब्रेरी कार्ड पाउनुहोस्, केहि किताबहरू पढ्नुहोस् वा सुन्नुहोस्। विपन्न वा जनावरहरूको साथ केही स्वयंसेवा कार्य गर्नुहोस्। कसैको सल्लाहकार बन्नुहोस् जो आफ्नो बाटो खोज्दैछ। एक स्थानीय समुदाय केन्द्र मा एक कला कोर्स लिनुहोस्।
यी चीजहरू एक व्यक्तिका रूपमा बढ्नको लागि सबै अपेक्षाकृत सस्तो तरिका हुन् र माचु पिचूमा सेल्फी नलिएर वा काहिराको छेउछाउका कलाकारहरू र सडक विक्रेताहरूले नचलाईएको नयाँ चीजहरूको अनुभव गर्छन्।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामान गर्नु हो। कुनै पनि कुरा भन्दा केही राम्रो छ। यदि यो तपाईंको लागि काम गरिरहेको छैन भने, तपाईंले गरिरहनु भएको सामान परिवर्तन गर्नुहोस् र केही नयाँ प्रयास गर्नुहोस्।
मबाट समाजले गरेका आशाहरू नि?
आदर्शवादीहरू, कलाकारहरू, स्वतन्त्र चिंतकहरूले आफूलाई कंठ र सामाजिक अनुकूलताको कहिलेकाँही कठोर संरचनाको साथ सीमित हुन सक्छ।
समस्या एकको साथीहरु र समूहहरु द्वारा एक सजीलो, सहज बाकस मा फिट गर्न को लागी सामाजिक दबाब द्वारा बढाइएको छ।
बक्स केहि व्यक्तिहरूको लागि आरामदायक ठाउँ हो। त्यहाँ मानिसहरू छन् जो समाजले उनीहरूबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने परम्परागत परिप्रेक्ष्यमा लाग्न खुशी भन्दा बढी खुशी छन् किनभने यसले स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्दछ, एउटा विश्वास छ कि त्यसले उनीहरूलाई खुशी र सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ।
समस्या यो हो कि सबैजना त्यस बक्समा फिट हुँदैनन्।
अझ खराब कुरा, भीडबाट बाहिर निस्कन र यथास्थितिमाथि प्रश्न उठाउने निर्णय गर्ने कसैलाई पनि लाज, आलोचना र उपहासको थुप्रो मन पर्छ।
दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यो हो कि यो परिवर्तन हुन असम्भव छ। को संसारको स्वतन्त्र आत्माहरु यदि उनीहरूले जीवनमा आफ्नै अर्थ र सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने आशा राख्छन् भने प्रतिकूल अपेक्षाहरू र अनावश्यक आलोचनाहरू हटाउन सक्षम हुनु आवश्यक छ, किनकि हराएको मार्ग उनीहरूको लागि होइन।
हुनसक्छ उनीहरूले अधिक गर्न चाहेका थिए। हुनसक्छ तिनीहरू अन्धकार स्थानहरूमा प्रकाश ल्याउने, स्वतन्त्र विचारलाई प्रोत्साहित गर्ने, र सामाजिक अवरोधहरू तोड्न मद्दतको लागि हुन् जुन अरू मानिसहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
एक स्वतन्त्र भावना स्थिर र एक दमनकारी, संरचित वातावरण जस्तै कर्पोरेट पदानुक्रम वा एक घरमा एक आमा बुबा को रूप मा दम हुन सक्छ।
के तिनीहरूले यी चीजहरू गर्न सक्छन्? निश्चित। व्यक्तिहरू पर्याप्त चीजहरू गर्न सक्छन् तिनीहरू आवश्यक अनुसार उपयुक्त छैन। तिनीहरूले? खैर, यो एक प्रश्न हो कि केवल व्यक्ति द्वारा उत्तर दिन सकिन्छ।
जे भए पनि, तिनीहरू चासो र जीवनमा व्यस्त रहन चाहन्छन् भने उनीहरूले उनीहरूको सृजनात्मकता र आत्मा फ्लेक्स गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ।
यसको मतलब वार्षिक स्थानमा छुट्टीको ठाउँमा कुनै स्थान रोचक, कला वा नृत्य वर्गहरू, वा केहि आफ्नो आत्माको कोर प्रोत्साहित गर्न र बौद्धिक उत्तेजना प्रदान गर्न केहि चीज हुन सक्छ।
जीवनको पट्टाइ छाड्न हामी के गर्न सक्छौं?
आफ्नो बोरियतसँग लड्नका लागि सबैभन्दा उचित तरिकाहरू पत्ता लगाउनु अघि तपाईंले यसको मूल कारणहरू जाँच गर्नुपर्दछ।
के तपाइँ केवल तपाइँको जीवनको एकलतात्वको द्वारा बोर हुनुहुन्छ? किनकि तपाईं एक्लो हुनुहुन्छ? किनभने तपाईं चुनौती दिनुभएन?
के तपाईंको जीवन बोरिंग छ किनकि तपाईंको जीवनका व्यक्तिहरूले तपाईंलाई बोर्याए? के तपाईंको भविष्यमा उत्साहित हुनको लागि त्यहाँ केही छैन?
के तपाई आफ्नो जीवनमा नियन्त्रण गर्न असमर्थ परिस्थितिको कारण विवश हुनुहुन्छ?
के तपाईंसँग ऊर्जा र सम्भाव्यताको एक अप्रयुक्त भण्डार छ कि तपाईंलाई आउटलेट चाहिन्छ?
के तपाईं एक अविवाहित जीवन बिताइरहनुभएको छ, तपाईंले नभएको जस्तो व्यक्ति बन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ?
अधिक तपाईको जीवनको साथको बोरियतको कारण (हरू) मा साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं बाहिर निस्कन र यसमा संलग्न हुँदा तपाईं अधिक लक्षित हुन सक्नुहुन्छ।
यहाँ एक मुठ्ठी चीजहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो बोरियत कम गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
१. कुनै संगठनको साथ स्वैच्छिक वा बाह्य काममा संलग्न हुनुहोस्।
स्वयम्सेवा कार्य एक नयाँ तरिका शाखा, नयाँ व्यक्तिहरू भेट्न, र विश्वमा सकारात्मक कुरा योगदान गर्न एक उत्कृष्ट तरिका हो।
त्यहाँ धेरै स .्गठनहरू छन् जुन आकस्मिक देखि कुशल श्रमसम्म सबैको आवश्यक छ। तपाइँ पनी आफ्नो व्यावसायिक कौशल र ज्ञान एक अर्थपूर्ण उद्देश्य को लागी काम गर्न को लागी सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
अर्को विकल्प छ तपाईको क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेशेवर संगठनमा सम्मिलित हुनुहोस्। यसले न केवल बोरियत र एकलता तोड्न, तर नयाँ व्यक्तिहरूसँग नेटवर्क गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंसँग व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
२. नयाँ सीपको सेट सिक्नुहोस्।
सीपहरूको नयाँ सेटको विकासको लागि धेरै तरिकाहरू छन्। इन्टरनेट विभिन्न गतिविधिहरूमा कसरी सुरू गर्ने भन्ने बारे भिडियो र गाईडहरूले भरिएको छ।
तपाईले निर्णय पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि कलेज जाने केहि थप पाठ्यक्रमहरू लिनको लागि राम्रो विचार हो।
कलेज कोर्सवर्कले संरचना, मार्गदर्शन, र कसैको पहुँच प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले सिक्नु भएको सीपको बारेमा जानकार छ।
अनलाइन कलेजले तपाईको व्यस्त जीवन छ भने कक्षामा जान सजिलो बनाउन सक्छ।
Social. सामाजिक सेटिंग्समा नयाँ मित्रता विकास गर्नुहोस्।
तपाइँ नयाँ साथीहरू कहाँ भेट्टाउनुहुन्छ? हुन सक्छ स्थानीय गतिविधिहरू जहाँ तपाईं आफ्नो क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ वा रूचि समूहहरूमा नियमित भेट अप फिचर गर्दछ।
धार्मिक व्यक्तिहरू नियमित सेवाहरू वा गतिविधिमा भाग लिन चाहन सक्छन् जुन तिनीहरूको पूजा स्थल हो।
स्थानीय सामाजिक मिडिया समूहहरू पनि गतिविधिहरू पाउन वा अप अपहरू भेट्टाउन राम्रो ठाउँ हुन सक्छ।
A. त्यस्तो ठाउँमा जानुहोस् जुन तपाईं कहिल्यै हुनुहुन्न।
तपाईंको जीवनमा केही उत्साह जगाउन सहयोगका लागि यात्रा टाढा र टाढाको हुनु आवश्यक पर्दैन।
यो शहरबाट बाहिरको केहि समारोहमा जानु जत्तिकै सरल हुन सक्छ जहाँ तपाईं राम्रो समय र आराम पाउन सक्नुहुन्छ।
हुनसक्छ शहर कन्सर्टबाट बाहिर छ र होटेलमा एक रात?
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा अन्य प्राकृतिक आकर्षणको लागि ट्रेक?
वा हुनसक्छ केही पैसा बचत गर्नुहोस् र दृश्य दृश्यको ठूलो परिवर्तनको लागि अलि अगाडि मैदानमा प्रहार गर्नुहोस्।
एक दिन लामो सडक यात्रा पनि एक दिन को दिन को जीवन देखि एक राम्रो ब्रेक हुन सक्छ।
A. नयाँ काम खोज्नुहोस् वा करियर परिवर्तन गर्नुहोस्।
व्यक्तिहरूको लागि उनीहरूको रोजगारी वा क्यारियरको छनौटको साथ अन्ततः पक्कै असामान्य हुँदैन।
उनीहरूले पत्ता लगाउन सक्दछन् कि उनीहरूले क्यारियरमा गलत विकल्प छनौट गरेको हुन्छ र अन्य विकल्पहरू हेर्नु पर्छ।
एउटा काम छोड्ने र / वा क्यारियर मार्गहरू परिवर्तन गर्ने छनौट कहिले हल्का हुँदैन, तर तपाईको जीवनमा बढी खुशी र शान्ति पाउन आवश्यक पर्दछ।
केहि समय वा भावनात्मक उर्जाको मात्र माग गर्दछन्। अरूले पर्याप्त उत्तेजना प्रदान गर्न वा तपाइँ कोठामा बढाउन कोठा दिन सक्दैन जुन तपाइँ वास्तवमै चाहानुहुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो क्यारियरसँग खुसी वा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, यो परिवर्तन खोज्न सुरु गर्ने समय हुन सक्छ।
Active. सक्रिय र व्यायाम गर्नुहोस्।
गतिविधि र व्यायाम एकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। डाक्टरहरू आसीन जीवनशैलीलाई स्वास्थ्य जोखिमको सन्दर्भमा नयाँ धूम्रपान गर्दैछन्।
र दिन को एक ठूलो हिस्सा को लागी एक डेस्क को पछाडिको धेरै कामहरु को साथ, यो कुनै आश्चर्य छ कि मानिसहरु आफ्नो जीवन को बारे मा अधिक उदास छन्।
व्यक्तिलाई व्यायाम चाहिन्छ राम्रो रसायनको अनुभव गर्नको लागि जुन तपाईंको शरीरले उत्पादन गर्दछ जब तपाईं ती गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ।
सानो सुरु गर्नुहोस् र सक्रिय हुनको लागि केहि गोलहरू सेट गर्नुहोस्। र यदि तपाईं पहिले नै सक्रिय हुनुहुन्छ भने, केहि बलियो लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस् - जस्तै म्याराथन समाप्त गर्ने वा तपाईंको क्षमता सुधार गर्ने।
Some. केही कला सिर्जना गर्नुहोस्।
विश्वका कलाकारहरू प्राय: कुनै न कुनै तरिकामा सिर्जना गर्नका लागि प्रेरित हुन्छन्। त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जो अरुको विचारका कारण वा जीवनले उचित समयलाई इन्कार गरेको कारण पटक्कै विमुख हुन्छन्।
एक कलाकार जसले सृजना गर्न बन्द गर्यो उसले फेरि यसमा फर्कने विचार गर्नुपर्छ। कला रचनात्मक दिमाग फ्लेक्स गर्न मद्दत गर्दछ रaगर्व को भावना र एक को काम मा उपलब्धि।
कलाकारहरूको स्वस्थ समुदायमा सम्मिलित हुनुहोस् जसले समान मध्यम अभ्यास गर्दछ र तपाईंको कार्यहरू सुधार र समाप्त गर्ने काम गर्दछ।
तपाईं यसमा उत्कृष्ट हुनुपर्दैन। धेरै थोरै मानिस छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंको कलालाई अrace्गालोन गर्नु हो यदि यसले तपाईंलाई खुशी दिन्छ।
Your. तपाईका प्रियजनहरूसँग बढी गुणस्तरीय समय बिताउनुहोस् र विषालु व्यक्तिहरूलाई काट्नुहोस्।
यो एक परिचित तथ्य हो कि तपाईंको प्रियजनहरूसँग बढी गुणस्तरीय समय खर्च गर्नाले दिमागले एन्डोरफिनहरू जस्तो धेरै रसायनिक पदार्थहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
कसैको मित्रता र सम्बन्धहरू कसरी व्यस्त जीवन सबैको लागि व्यस्त हुन सक्छ भन्ने कुरालाई स्लाइड गर्न यो धेरै नै सजिलो छ।
एक व्यक्ति आफ्नो साथीहरु र परिवार संग सम्पर्कमा रहन को लागी प्रयास गरी ती सम्बन्धहरुलाई अबाधित राख्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ।
यसको अक्सर मतलब जमघटमा जानुहोस र चीजहरू जुन तपाईलाई आवश्यक पर्दैन वा जस्तो जान चाहनुहुन्न।
त्यहाँ सामाजिक बन्न चाहने वा भाग लिनको लागि थकित नभएको साझा थ्रेड छ, तर यदि तपाइँ यस बान्कीमा खस्नुभयो भने, जीवनले तपाईंलाई पछाडि छोडिनेछ।
तपाईंलाई आमन्त्रित गरिएको बस्तुहरूमा भाग लिनुहोस्, वा तपाईंको आफ्नै पार्टी फेर्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग धेरै भइरहेको छैन भने।
र केहि छ भने आफ्नो जीवन बाहिर विषाक्त मान्छे काट्ने विचार गर्नुहोस्। तिनीहरू एकको खुशी र दिमागको शान्ति मा एक गहन नाली हो।
A। तपाईको भन्दा ठूलो उद्देश्य वा कारण खोज्नुहोस्।
मानिसहरु लाई सम्बन्धित छ । तिनीहरू आफैलाई भन्दा ठूलो केहि गर्न योगदान दिन चाहन्छन्।
उद्देश्य खोज्दै वा आफैलाई प your्क्तिबद्ध गर्नका लागि कारण र तपाईंको सीपले संसारमा भिन्नता ल्याउनमा गर्व र खुशीको भावना प्रदान गर्न सक्दछ।
त्यो भन्दा सोच्न सजिलो लाग्यो भन्दा भयो, तर वास्तवमै त्यहाँ धेरै आन्दोलनहरू र समूहहरू छन् जुन प्रयास गरिरहेका छन् विश्व मा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुहोस् कि तपाईं एक हिस्सा हुन सक्छ।
१०. सेट गर्नुहोस् र लक्ष्यहरू पछ्याउनुहोस् जुन तपाईंलाई उपलब्धिको अनुभूति प्रदान गर्दछ।
गोल सेटिंग आत्म-सुधार र भावनाको एक अनिवार्य अंश हो जस्तो कि कुनैले आफ्नो जीवनमा चीजहरू पूर्ण गर्दैछ।
लक्ष्य वा दिशाबिना बग्न यो सजिलो छ, तर त्यसो गर्नाले तपाईंलाई यस्तो लाग्ने क्षमताबाट वञ्चित हुन्छ कि तपाईंले आफूले गर्न चाहेको केही छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र यो हासिल गर्नुहोस्, यस्तो भावना जुन डोपामाइनको राम्रो हिट प्रदान गर्न सक्दछ जब तपाईं यसलाई आफ्नो कार्य-सूचीबाट बाहिर पार गर्नुहुन्छ र गति प्राप्त गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ गोल सेटिंग को लागी धेरै दृष्टिकोणहरु छन्, तर सामान्यतया एकले आफ्नो जीवनको लागि छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू तय गर्न चाहान्छ।
तिनीहरू तपाईंको स्वास्थ्य, क्यारियर, व्यक्तिगत जीवन, वा शौकमा सम्बन्धित हुन सक्छन्।
११. ती चीजहरू गर्न रोक्नुहोस् जुन तपाईलाई उत्साहित पार्दैन वा खुशी प्रदान गर्दैन।
यसभन्दा पहिले हामीले नयाँ चीजहरू खोज्नको लागि कुरा गर्‍यौं जुन तपाईंलाई खुशी र अर्थ ल्याउँदछ।
तर के सबै चीजहरूका बारे तपाईले अहिले गरिरहनु भएको छ नगर्नु ती भावनाहरु मध्ये कुनै एक प्रदान गर्ने?
तिनीहरूलाई रोक्न विचार गर्नुहोस्।
यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो सबै वर्तमान जिम्मेवारीहरू शर्त गर्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि, यदि तपाईंसँग अन्य व्यक्तिहरू छन् जसले तपाईंलाई प्रदान गर्न र / वा तिनीहरूको हेरचाह गर्न निर्भर छन् भने, तपाईंले ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्दछ।
तर तपाईंको जीवन र तपाईंले गर्नुहुने चीजहरूलाई हेर्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईंको लागि साँच्चिकै अर्थ राख्छन् कि गर्दैनन्।
सायद तपाईले किनमेल गर्नुहोला।
वा तपाई हरेक रात समाचार हेर्नुहुन्छ केवल समय भर्नु को लागी।
वा हुनसक्छ तपाईले हरेक शुक्रबार राति कडा पार्टी गर्नुभयो किनकि तपाईका सबै साथीहरूले यो गर्छन् र तपाईले सँधै यो गर्नुभयो।
यदि केहि अब तपाइँको समय को लागी योग्य लाग्छ, यो नगर्नुहोस्।
कृपया नोट गर्नुहोस्: यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईले कुनै पेशेवरलाई कुरा गर्नुहुन्छ जब तपाई डिप्रेसनबाट पीडित हुनुहुन्छ वा पहिल्यै तपाईलाई खुशी पार्ने चीजहरू त्याग्नु हुन्छ भने। अघिल्लो लेखमा भनिएझैं उदासिनता तपाईंलाई पट्टाइलाग्दो र आनन्दित महसुस गर्ने कारण हुन सक्छ।
बोरियत बिनाको जीवन ...
... उद्देश्य संग पछि लागेको जीवन हो। तपाईको उद्देश्य के हो भन्नेले खास फरक पार्दैन, जब सम्म तपाई एउटा पाउन सक्नुहुन्छ।
एउटालाई भेट्ने उत्तम तरिका भनेको त्यहाँ बाहिर पुग्नु र चीजहरू शुरू गर्नु हो।
तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईले छनौट गर्नुभएका कुराहरुले तपाईलाई उत्साह र खुशीमा पुर्‍याउँदैन, तर तिनीहरूले तपाईलाई ज्ञान, अनुभव, वा व्यक्ति तपाईले अर्को बाटोमा जान आवश्यक पर्ने चीजहरू प्रदान गर्न सक्दछन्।
अस्वस्थता वा उदासिनताले तपाईंलाई पटक्कै पत्याउन नदिनुहोस्। त्यहाँ फिर्ता जानुहोस् र प्रयास जारी राख्नुहोस्।
र यदि तपाईले पाउनुभयो कि यो असाधारण अप्ठ्यारो छ वा तपाई आफैले दिशा फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता वा जीवन कोचबाट सहयोग लिन सार्थक हुन सक्छ।
मद्दत लिन हिचकिचाउँनुहोस् यदि तपाईंसँग गाह्रो समय छ र पक्का छैन कि कुन दिशा जान जान्छ।
अझै पक्का छैन कि कसरी जीवनको पट्टिलो बोरि stop्ग रोक्न? आज एक जीवन कोचसँग कुरा गर्नुहोस् जो तपाईंलाई प्रक्रियामा हिंड्न सक्छ। केवल एक संग कनेक्ट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको सम्बन्धमा ऊबियो? आफैलाई सोध्नुहोस् यी Questions प्रश्नहरू किन
यदि तपाईंले आफ्नो मोजो हराउनु भयो भने, यी ११ कार्यहरू नगर्नुहोस्
आफूलाई वास्तवमै गर्न चाहनुहुन्न केहि गर्न आफूलाई कसरी ल्याउने
अस्तित्वगत उदासीनता: कसरी तपाईंको अर्थहीनताको भावनाहरू हटाउने
राम्रोको लागि तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न, तपाईंसँग २ विकल्पहरू छन्
श्रीमतीले जागिर पाउन अस्वीकार गरिन्
पहलवान जो २०१। मा मरे
जब मानिसहरु तपाईलाई मतलब छ
शॉन माइकल्स बनाम ब्रेट हार्ट रेसलमेनिया १२